UKevin Hart kunye neNetflix Fikelela kwiDeal eya kumbona ngeNkwenkwezi kwiimuvi ezininzi - Inkcubeko Yopopu
UKevin Hart kunye neNetflix Fikelela kwiDeal eya kumbona ngeNkwenkwezi kwiimuvi ezininzi
Kwisivumelwano esivakala ngokufana naleya sayenzayo noAdam Sandler malunga nonyaka ophelileyo, iNetflix igqibe isivumelwano noKevin Hart kunye nenkampani yakhe yemveliso (HartBeat Productions) ubuncinci ezine bhanya-bhanya ezivezwe kwaye zenziwa nguHart.
Ngokwe-Deadline , Isivumelwano sikwabandakanya isivumelwano sokuqala sokuvelisa imiboniso bhanyabhanya.
Iinkcukacha zemali bezingafumaneki, kodwa bekukho amahemuhemu ukuba isivumelwano sikaSandler kunye nokusasaza sasikwindawo ethile ejikeleze i-150 yezigidi zeedola.
Konke oku kuza emva kweyona Hart ikhethekileyo yokuhlekisa, Zero F ** ks Inikiwe , yabikwa ukuba yeyona bhanyabhanya inkulu yeNetflix kolo hlobo lwentlobo yowama-2020. Yenze njalo emva kokulibala ngaphezulu kwe-21 yezigidi zee-akhawunti ukuyivula ngeeveki zayo zokuqala ezine eqongeni.
Okuqaphelekayo kukuba iifilimu zakhe zivelise ngaphezulu kwe- $ 4 yezigidigidi kwiiofisi zebhokisi kwihlabathi liphela.
Hart ubhiyozele / ubhengeze iindaba ngesi sithuba se-IG:
indlela yokwenza umxube ikeyiki emhlophe
Kananjalo, njengoko kunjalo kwizinto ezinje, kunikwe ingxelo ezisesikweni.
Ukusebenzisana neNetflix lithuba elimangalisayo leHartBeat kunye nam, utshilo uHart. Ndonwabile ukudlala kunye nokuvelisa iifilimu ezinqamlezileyo ngeNetflix. Ndinombulelo omkhulu [kubaphathi beNetflix] uTed Sarandos kunye noScott Stuber, sabelana ngombono omnye wokuyila kwaye sihlala sibeka abaphulaphuli phambili. Eli shishini limalunga nokukhula kwaye iqela lam leHartBeat liyaqhubeka ukugqitha kulindelo lwam ngamandla abo okuphuhlisa amabali kunye nobudlelwane. Injongo yethu kukwenza igama leHartBeat lifane nokuzonwabisa lodidi lokuqala kunye neengxelo.
Kwabo bayazibuza, uSarandos ligosa eliyi-co-CEO / igosa eliyintloko lomxholo weNetflix, ngelixa uStuber eyintloko yeefilimu zokuqala zomsasazi.
Ukongeza kolo lwazi lubonelela ngemeko yesicatshulwa osandul 'ukusifunda, ikwaseta oku kulandelayo kuba uStuber wakhupha ingxelo.
UNicki minaj waqhekeza kunye nokusila okululamileyo
INetflix ibonwabele ubudlelwane obude noKevin kwaye sinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ndingadibana naye amaxesha amaninzi, utshilo uStuber. Unazo umvelisi wezandla kwaye kuye kwamnandi ukumbukela esakha inkampani engakholelekiyo ngeHartBeat. Bambalwa kakhulu amagcisa anokutsala abaphulaphuli bayo yonke iminyaka kwaye aphumelele ekwenzeni ii-comedies, iidrama kunye neefilimu zosapho. Babonwabile ukusebenzisana noKevin, kunye neqela lakhe elikhulu eHartbeat, ukonwabisa abaphulaphuli bethu kwiminyaka ezayo.
Umongameli weHartbeat, uBryan Smiley, naye ubeke ingxelo. Kuya kufuneka ndongeze ukuba ndiyabulela ukuba usazifunda ezi.
Andonwabanga kwesi sahluko sitsha sinomdla kwimbali yeenkampani zethu, utshilo uSmiley. 'Mna noKevin sizimisele ukwenza eyona bhanyabhanya yeklasi kunye namaqabane ethu amatsha kwiNetflix. Esi sivumelwano sokuqhekeza umhlaba siqinisekisa ukuba imveliso yeHartBeat iya kujongwa zizigidi zabantu kwihlabathi jikelele, kwiminyaka emininzi ezayo.
Kwezinye iindaba zeHart kunye neNetflix, i-comic isetelwe ukuba ibe neenkwenkwezi kunye nolawulo oluphezulu oluvelisa uthotho olunomda Ibali lokwenyani , ephawuleka kuba iya kuphawula ukuqala kwakhe kuthotho lweedrama.
Uyenza njani iividiyo zekhekhe lomnyama
indlela yokudlwengula njengo-lil wayne
Indlela elula yokuhombisa ikeyiki
Ngaba hugh jackman usaya kuba yi-wolverine